Ebbi maanguddoota Keenya bakka jirtanitti haphee ta'ee isinitti haa qabatu.
Waldaan barattoota mana barumsaa Ijaajjii duraanii yeroo adda addaa Ummata isaanii Aanaa iluu Galaan jiraniif deggarsa taasisaa turun isaanii ni beekama.
Guyyaa har’aas Sababa dhibee koronaatiin harka qalleyyi dinagdeen isaanii laafeef deeggarsa taasisaniiru.
Deeggarsi kunis Daaku Kumtaala 40, Boqqolloo kuntaala 40, zayita nyaataa abbaa Litira sadii 402. Akkasumas sanitiyzeri Abba mil.500ni 50, Safartuu ho’insa qaamaa 2, maksii 1000 fi saamunaa qaamaa 200 dabalatee harka qalleeyyii Namoota 400 ta’aniif gumaachanii jiru.
Kanamalees Waldaan keenya Barattoota dinagdee laafaa qaban 2 Univarsiitiitti barsiisaa jira
Fulduraaf Piroojeekti Bishaan dhugaati fi mana dubbisaa (Library) magaala Ijaajjii keessatti hojjechiisuuf dizaayiniin isaa xumuramee jira. Yoo wal gargaarre kanas akka milkeessinu abdiin jira.
Maanguddoonni biyyaa fi qaamoleen mootummaas sirna deeggarsa kana irratti argamanis tumsa ijoolleen biyyaa ummata isaaniif taasisan dinqisiifataniiru. Miseensota waldaa keenyaa hundas galateefataniiru, Eebbas itti roobsanii jiru.
Walgargaarree Ummata keenya nu barsiise cinaa dhaabbachuun keenya itti fufa.
Ijoollee keenyaaf dadhabbiin keessan lafa hin buune, Jabaadhaa